Kraft taratasy kitapo dia mifototra amin'ny pulp taratasy hazo, loko mizara ho fotsy taratasy kraft sy mavo taratasy kraft, afaka mampiasa fitaovana PP amin'ny taratasy miaraka amin'ny sosona ny sarimihetsika, tantera-drano vokany, kitapo tanjaka azo atao araka ny mpanjifa takiana ny iray ka enina sosona, pirinty ary fampidirana kitapo. Op ...
Ny fihetsika rehetra ataon'i Hongbang dia feno fijinjana. Tamin'ny fampirantiana Iraisam-pirenena tany Indonezia dia nivoaka indray i Hongbang. Fahombiazana tanteraka izany ary nitafa tamina fandaharana amin'ny fahitalavitra iray teo an-toerana. Amin'ity fampirantiana ity dia mampiseho ny toe-tsain'i Hongbang indray isika - firaisankina, tsara, str ...
Fampirantiana fanontana sy fanontana iraisam-pirenena Hong Kong
Ny fampirantiana ny famoahana sy famonosanana iraisam-pirenena Hong Kong faha-7 dia sehatra fandraharahana mihaja sy tsy fahita firy ho an'ny indostria. Nanjary tetezana sy foibeny lehibe mampifandray ireo mpanome tolotra fanontam-pirinty sy fonosana amin'ireo mpanamboatra manerantany, mpamatsy serivisy ...